မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ ကို ကြမ်းတမ်းသော မျက်ခွံအတွင်းသားရောင်ရမ်းနာ ၊ အီဂျစ်လူမျိုး မျက်လုံးရောင်ရမ်းနာ နှင့် အမြင်အာရုံကွယ်စေသော မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ၎င်းမှာ Chlamydia trachomatis ဟုခေါ်သော ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ပွားသော ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤကူးစက်ရောဂါသည် မျက်ခွံအတွင်းလွှာရှိ ဂရမ်နူလေးရှင်းတစ်ရှူးဟုခေါ်သော မျက်နှာပြင်ကို ကြမ်းတမ်းစေသည်။ ဤသို့မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းလာသောကြောင့် မျက်လုံးနာခြင်း၊ မျက်ကြည်လွှာ ပျက်စီးခြင်းနှင့် အမြင်အာရုဏ်ကွယ်ခြင်းတို့ပါ ဖြစ်နိုင်သည်။
2. ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်း
သန့်ရှင်းသော ရေကို ပေးဝေခြင်းဖြင့် ဤရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ရောဂါခံစားနေရသူများကို ပဋိဇီဝဆေး တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်သည်။ ရောဂါကုသရာတွင် ရောဂါဖြစ်လေ့ရှိသော လူများအားလုံးကို တပြိုင်နက်ကုသရမည်။ ရေဖြင့် သန့်ရှင်းအောင် ဆေးကြောခြင်းတစ်မျိုးထဲဖြင့် ဤရောဂါကို မကာကွယ်နိုင်သော်လည်း အခြားရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့် အတူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သည်။ အဇီသရိုမိုင်စင်သောက်ဆေး သို့မဟုတ် တက်ထရာစိုင်ကလင်းလိမ်းဆေးဖြင့် ကုသနိုင်သည်။ အဇီသရိုမိုင်စင်သည် တစ်ကြိမ်သာ သောက်သုံးရန်လိုအပ်သဖြင့် ရောဂါကုသရာတွင် ပိုအသုံးဝင်သည်။ အကယ်၍ မျက်ခွံပေါ်တွင် အမာရွတ်ပေါ်လာပါက မျက်တောင်မွှေးများ နေရာမှန်ရောက်အောင် ခွဲစိက်ကုသခြင်းဖြင့် အမြင်အာရုဏ်ကွယ်ခြင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်သည်။
3. ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း၊ ကူးစက် ပျံ့ပွားမှု နှင့် ရောဂါသမိုင်း
ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ဤရောဂါဖြစ်ပွားသူများ သန်းပေါင်း ၈၀ခန့်ရှိသည်။ တချို့နေရာများတွင် ကလေးပေါင်း ၆၀-၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဤရောဂါဖြစ်ပွားနေပြီး အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ကလေးများနှင့် ပို၍ထိတွေ့မှုရှိသောကြောင့် ပို၍အဖြစ်များသည်။ လူပေါင်း ၂.၂ သန်းခန့်မှာ ဤရောဂါကြောင့် အမြင်အာရုဏ် ချို့ယွင်းနေပြီး လူပေါင်း ၁.၂ သန်းခန့်မှာ လုံးဝ အမြင်အာရုဏ်ကွယ်သွားကြသည်။ ဤရောဂါသည် အာဖရိကတိုက်၊ အာရှတိုက်၊ အမေရိကတိုက် အလယ်နှင့် တောင်ပိုင်းတို့ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၅၃ နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေပြီး လူပေါင်း သန်း၂၃၀မှာ ဤရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ဤရောဂါကြောင့် အမေရိကနိုင်ငံတွင် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈သန်းခန့် ကုန်ဆုံးနေသည်။ ဤရောဂါသည် လျှစ်လျူရှူခံထားရသော အပူပိုင်းဒေသရှိ ရောဂါများ ဟုခေါ်သော ရောဂါအုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။
၁၉၁၈ တုပ်ကွေး ကမ္ဘာကပ်